ဆားနယ်ဆော်လမွန် hash နှင့်အတူမူရင်းစာရွက် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စားပွဲပေါ်နွေရာသီမကြာခဏအများအပြား hash ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီပန်းကန်ငါတို့၏ကိုယ်ခငျြးကိုနိုင်ငံသားများ၏မတ်ေတာအတှကျသိ, ဖုံးကွယ်ဖို့အဲဒီမှာတကယ်ကဘာလဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောသင်သည်မည်သည့်ကဖီးနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် hash အမျိုးအစားများ, ဤအဖွဲ့အစည်းများ၏စားဖိုမှူးကဒီမူရင်း Add အကြိုက်ဆုံးဟင်းမှ hash များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများအတူတက်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲဆားနယ်ဆော်လမွန်၏ချပ်နှင့်အတူ okroshka ကိုမြည်းစမ်းခဲ့ကြသလား ဒီနွေရာသီ super-စာရွက်ဖြည့်ဆည်း - ဆော်လမွန်၏ချပ်နှင့်အတူ kvass နှင့်အတူအအေးဟင်းချို, က yummy ပဲ!
hash လိုအပ်ထုတ်ကုန်များ၏ 5-6 စားသုံးခြင်း on:
hash များအတွက် 1,5 ဌ kvass ပေါင်မုန့် (ဆိုလို unsweetened);
270 ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း အနည်းငယ်ဆား salmonပြီးသား filet အပေါ်ကုန်တယ်;
1 မီးသီး အနီရောင်အမျိုးမျိုး (Crimean ကြက်သွန်, သို့မဟုတ် Yalta);
ဆော်လမွန်ငါးနှင့် okroshka ချက်ပြုတ် - စာရွက်
1 ။ အာလူးကိုလျှော်ယူနီဖောင်းအတွက်ချက်ပြုတ်ဖို့ထားလေ၏။ အနာစိမ်းကြက်ဥအနီးရှိ burner တွင်။ နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်အအေး, အနိန်တန်းတူ Cube ပန်းကန်လုံးထဲသို့ပြိုလဲသွားပြီထို့နောက်ဖြစ်ကြသည်။
2 ။ ဖြတ်မရနိုငျသောပါးလွှာအရေပြား, အတူဆေးကြောသခွားသီးခုတ်။
3 ။ ခွံထုတတ်နိုင်သမျှကြက်သွန်နီနှင့် poshinkuyte ။ အဲဒါကိုအရည်ရွှမ်းနှင့်သည်ချို၏ခါးသောအရသာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Crimean ကြက်သွန်ကောင်းလှ၏။ အအေးဟင်းချိုများအတွက်စံပြ, တကကုန်ကြမ်း form မှာထားရန်သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်အလွန်အမင်းအသုံးဝင်သည်။
4 ။ ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူ okroshka များအတွက်စာရွက်နှင့်အညီ - ဇီယာစေ့၏အကိုင်းအခက်မှာအဓိကအားဖြတ်, တတ်နိုင်သမျှသေးငယ်တဲ့ချွန်ထက်သောဓါးနှင့်အတူအရွက်ခုတ်။ သခွားသီးများ၊ ကြက်သွန်နီများနှင့်ဇီယာစေ့များကိုဥများနှင့်အာလူးများအတွက်ပန်းကန်ထဲသို့ပို့ပါ။
5 ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုတင်မဲအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ chilled ဆော်လမွန်၏သပ်သပ်ရပ်ရပ် Cube သို့ခုတ်ဖြတ်။ ဆားမြည်းစမ်းရန်, okroshka နှင့်ရောနှောအတူပန်းကန်မှထည့်ပါ။
6 ။ kvass တစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလီတာကို ယူ. , အချဉ်မုန့်တစ်ခွက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ ကောင်းစွာနှိုးဆော်နှင့်တစ်ဦး hodgepodge သို့သွန်းလောင်း။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်အခြားနို့တိုက်ကျွေးမှုမပြုမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်နာရီအအေး။
တွင်းထွက်ရေပေါ်မှာဆားဆားနှင့် kefir နှင့်အတူ Okroshka - ဗီဒီယိုနှင့်အတူစာရွက်
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,221 စက္ကန့်ကျော် Generate ။